မောင်ကြူးရင့် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Sitagu Sayadaw Dhamma Talk in Sydney, Australia, 26th April 2008
Posts Tagged ‘ မောင်ကြူးရင့် ’
မောင်ကြူးရင့် – ”နေ့ဟာလင်းလျက်ချက်ချင်းမှောင်သွားတယ်”
မောင်ကြူးရင့် – ”နေ့ဟာလင်းလျက်ချက်ချင်းမှောင်သွားတယ်” (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ဆရာဝန်အယ်ဒီတာကဗျာဆရာကို လက်ထိပ်တန်းလန်ဲးနဲ့မြင်ရတော့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ် တချိန်တုန်းကအပြစ်မရှိပဲပြစ်မှုမမြောက်ဘဲ လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ငါ့ကိုဖမ်းသွားတာကိုအမှတ်ရတယ် ဖွတ်ထွက်တဲ့တောင်ပို့ဟာ ဖွတ်ထွက်တဲ့တောင်ပို့ပါပဲ လောကပါလတရားရဲ့လောကနတ်ရုပ်ဟာ ခေါင်းတခြမ်းပဲ့နေပြီလား ဂေါက်သီးကိုဂေါက်တံနဲ့ ကျင်းဝင်အောင်ရိုက်မှာလား...
မောင်ကြူးရင့် ● လူထု (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈ လူထုဟာ ကျွန်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ လူထုဟာ နယ်ချဲ့ခေတ် ဖက်ဆစ်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ လူထုဟာ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ လူထုဟာ စစ်အာဏာရှင်က...
မောင်ကြူးရင့် ● တော်လှန်သောအလွမ်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၉၊ ၂၀၁၈ မငိုတတ်ပေမယ့် လွမ်းမိတယ် မလွမ်းတတ်ပေမယ့် ငိုမိတယ် ခင်လွန်း အတိတ်ရွက်ကြွေတောကြီးဆိုတာ လွမ်းမောစရာတွေအပြည့်ပါလား ဝေးပုံဆန်း ချစ်သူတွေ အနှစ်နှစ်ဆယ်ဝေးကြ ခေတ်ကြီးတခေတ်ခြားထားသလို ဝေးကြ...
မောင်ကြူးရင့် ● ကျည်ဆန်ရထား ချေဂွေဗားရား ချမ်းမြေ့မောင်ချို (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၊ ၂၀၁၈ ပို့စ်မော်ဒန်ကျည်ဆန်ရထားဟာ ငါ့ဦးဏှောက်ထဲမှာ ရိတ်ကနဲ ရိတ်ကနဲ ပြေးနေတယ် ကျည်ဆန်ရထားဟာ အမေရိကန်မှာ ရပ်နားတုန်း လေဟာပြင်မှာ ဖျော်ဖြေနေတဲ့...
မောင်ကြူးရင့် – ထင်ရူးပင်ရိပ် နှစ်ငါးဆယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ ( ၁ ) ဆရာမောင်သာနိုးဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ထင်ရူးပင်ရိပ်နိုင်ငံတကာကဗျာစာအုပ်ဟာ နှစ်ငါးဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရာစုနှစ်နဲ့ပြောရရင် ရာစုနှစ်ဝက်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာကဗျာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာ ကြည့်ရင် ဘာသာပြန်ကဗျာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ မြန်မာကဗျာဘာသာပြန်သမိုင်းကို...
မောင်ကြူးရင့် ● လာ ရဲရဲ တံတားသစ်ဆီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၈ ဘဝဆိုတာ ကမ္ဘာကျော်ဟောလီးဝုဖ် ရုပ်ရှင်ကားမဟုတ်ဘူး လူကောင်းမဟုတ်ရင် လူဆိုး လူကြီးလူကောင်းမဟုတ်ရင် ဗီလိန် ဇာတ်လိုက်မဟုတ်ရင် လူကြမ်း သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်...
မောင်ကြူးရင့် – မောင်ကြီးရွာပြန် (မိုးမခ) မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ရန်ကုန်တခေါက် အလည်ရောက်ခဲ့တယ် ဝါရွှေနု ကံ့ကော်ပွင့်ကလေးတွေကတော့ အရင်အတိုင်းမွှေးမြနေတုန်းပါပဲ အမေမရှိတော့အိမ်ဟာ ကန္တာရထဲကသစ်ခြောက်ပင်လို အထီးကျန်ဆန်လွန်းပါရဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း အများစုကတော့ သဲပူပေါ်ပစ်တင်ခံရတဲ့ငါးလို...
မောင်ကြူးရင့် ● ခံတပ် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ အချစ်ရယ် အခြေအနေက ထိလွယ် ကွဲလွယ် ကြက်ဥတပွေ့နဲ့ လမ်းလျှောက်နေရသလို အချစ်ရယ် လေပြင်းကျတဲ့အခါ ပန်းကလေးတွေ သစ်ရွက်ကလေးတွေ ကြွေသွားနိုင်တယ် အချစ်ရယ်...
မောင်ကြူးရင့် ● အလံ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၉၊ ၂၀၁၇ အလံဟာ ငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ် ငါတို့ရဲ့အသက် အလံဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝိညာဉ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အသက် အလံဟာ သမိုင်းရဲ့ဝိညာဉ် သမိုင်းရဲ့အသက် ထီးကျိုးစည်ပေါက် အလံပျောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ...
မောင်ကြူးရင့် ● အိမ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၇ (မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၃၊ မတ်လထုတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ကဗျာဖြစ်သည်) သစ္စာတရားထွန်းကားရာ ငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ကလေးဆောက်ကြမယ် မေတ္တာတရားပွင့်သစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ကလေးဆောက်ကြမယ်...
မောင်ကြူးရင့် ● အိမ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇ သစ္စာတရားထွန်းကားရာ ငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ကလေးဆောက်ကြမယ် …။ မေတ္တာတရားပွင့်သစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ကလေးဆောက်ကြမယ် …။ ဉာဏ်ပညာဝင်းပရာ ငြိမ်းချမ်းသောအိမ်ကလေးဆောက်ကြမယ် …။ မင်းက စန္ဒယားတလုံးဖြစ်ရင် ကိုယ်က...
မောင်ကြူးရင့် ● အိမ်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၆ အိမ်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေးကို ဘယ်သူမဆို မလိုချင်ပဲရှိပါ့မလဲ အိမ်ဆိုတာကလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံခြုံခြုံ ခွင့်တူညီမျှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြူဖြူစင်စင် သပ္ပါယ်စရာ ဘုရားစင်နဲ့...
မောင်ကြူးရင့် ● ကဗျာဆရာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၆ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ ကမ္ဘာဆိုတာ ရွာကြီးတရွာပေါ့ ကမ္ဘာ့အိမ်ရာကြီးဆိုပါတော့ အဲ့ဒီ့ကမ္ဘာ့အိမ်ရာကြီးထဲမှာ ကဗျာဆရာ နေထိုင်တယ် ကဗျာဆရာဟာ ကဗျာရေးတယ် ကဗျာအလုပ် … လုပ်တယ်...
မောင်ကြူးရင့် ● အဝေးအိမ် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၆ မလွတ်လပ်မှလွတ်လပ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိသလိုမျိုး လရောင်မမြင်ရမှလရောင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိသလိုမျိုး အမေမရှိတော့မှအမေရဲ့တန်ဖိုးကိုသလိုမျိုး အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သလိုတမြေ့မြေ့နာ အဝေးအိမ်ကိုလွမ်းတယ် အိပ်ခဲ့တဲ့အခန်းကျဉ်းလေးရောရှိသေးရဲ့လား ကျောင်းပြေးဖော်သူငယ်ချင်းတွေရောရှိသေးရဲ့လား လက်ဆုပ်ပုခုန်းဖက်ရဲဘော်တွေရောရှိသေးရဲ့လား အဝေးအိမ်ကိုလွမ်းတယ် အိပ်မက်ရိပ်ခုံတန်းလေးရောရှိသေးရဲ့လား စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးရောရှိသေးရဲ့လား စာအုပ်ဟောင်းအရောင်းတန်းလေးရောရှိသေးရဲ့လား...
မောင်ကြူးရင့် – ဘဘနဲ့ မြေးမလေး
မောင်ကြူးရင့် – ဘဘနဲ့ မြေးမလေး (မိုးမခ) ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၆ ဘဘ ထိုင် …. ထိုင် ရားရှိခိုးရယ် …. ရားရှိခိုးရယ် ၂ နှစ်လေးလသမီး မြေးမလေးမြတ်သီရိခင်နဲ့ ဘုရားကိုဦးချတဲ့အခါ...
မောင်ကြူးရင့် ● စိတ်မီးလောင်ခြင်း (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး ငါ့ကိုဖမ်းသွားတာ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲ စာအုပ်တွေအားလုံး ကားပေါ်ပစ်တင်ပြီး လွတ်တော့ပြန်မပေးတာ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲ ရင်ဝကိုဖိနပ်နဲ့ ဆောင့်ကန်တာ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်သူက...